ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် တိုယိုတာမတ်ခ် အိတ်ခ်ျ များ | တိုယိုတာမတ်ခ် အိတ်ခ်ျကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
A/C: Front (12)
Cassette Radio (12)
Pearl white Toyota Mark X 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start....
Black Toyota Mark X 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင...
Lks 790 ညှိနှိုင်း
Black Toyota Mark X 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ (ချယ်လ်စီးနံပါတ် GRX133-6003458) သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်...
Lks 660 ညှိနှိုင်း
Black Toyota Mark X 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ (ချယ်လ်စီးနံပါတ် GRX130-6042877) သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်...
Lks 253 ညှိနှိုင်း
Pearl White Toyota Mark X 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Silver Toyota Mark X 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Lks 378 ညှိနှိုင်း
Pearl White Toyota Mark X 2005 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Lks 425 ညှိနှိုင်း
Toyota Mark X Zio Push Start7seaters 2.4 2WD Good condition
Lks 610 ညှိနှိုင်း
Black Toyota Mark X 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Lks 279 ညှိနှိုင်း
Lks 285 ညှိနှိုင်း
Black Toyota Mark X 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Lks 305 ညှိနှိုင်း
Toyota Mark X G Grade 2011
JPM Services Co.,Ltd
Black Toyota Mark X G Grade 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...
Silver Toyota Mark X 2005 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Lks 668 ညှိနှိုင်း
Pearl white Toyota Mark X 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start....
Black Toyota Mark X 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင...
Lks 730 ညှိနှိုင်း
Pearl white Toyota Mark X 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start....
Lks 252 ညှိနှိုင်း
Lks 307 ညှိနှိုင်း
Toyota Mark X 350 S 2012
Lks 820 ညှိနှိုင်း
Black Toyota Mark X 350 S 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start,A/C: Rear. ...
Toyota Mark X Premium 2012
Pearl white Toyota Mark X Premium 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start,A/C...
Lks 400 ညှိနှိုင်း
Pearl White Toyota Mark X 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Pearl White Toyota Mark X 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airb...
Pearl white Toyota Mark X 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်းလု...
Pearl White Toyota Mark X 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airb...
Toyota Mark X G Grade 2012
Pearl white Toyota Mark X G Grade 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push...
တိုယိုတာ မတ် အိတ်ခ်ျများ
တိုယိုတာ မတ် အိတ်ခ်ျတွေဟာ မတ်တူးလို မော်ဒယ် နိမ့်တွေ မဟုတ်ပဲ ၂၀၀၄ မော်ဒယ်ကနေ စထုတ်တဲ့ မော်ဒယ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၄ ထိကို ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပြီး မော်ဒယ်တွေ မြင့်တဲ့ အတွက် ကားပုံစံက Lexus လို သစ်လွင် ဆန်းသစ်ပါတယ်။ ဆလွန်ကားအမျိုးအစားထဲမှာ ပါဝင်ပြီး တံခါးလေးပေါက်နဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်အပြင် တရုတ်မှာ တစ်ခြား နာမည်တစ်ခုနဲ့ ရောင်းပါတယ်။ ၃၀၀၀ စီစီ အင်ဂျင်၊ ၂၅၀၀ စီစီ အင်ဂျင်တွေကို နှစ်မျိုး ထွက်ပြီး နှစ်မျိုးလုံးမှာ ဗီဗီတီအိုင် အင်ဂျင် နှစ်လုံးပါရှိပါတယ်။ ဂျပန် မော်ဒယ်တွေအတွက်ဆို ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင်တွေ ရှိပါတယ်။ နောက် ဘီးမောင်း ဖြစ်ပြီး ဂီယာ ၆ချက် အော်တို တွေကို ပုံမှန် စံနှုန်းတစ်ခု အနေနဲ့ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး လေးဘီးမောင်း စနစ်ကားတွေကတော့ ဂီယာ (၅) ချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မတ် အိတ်ခ်ျတွေဟာ မတ်တူးတွေရဲ့ အောင်မြင်မူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မီးလုံးတွေမှာ ဆန်းသစ်ထားပြီး ဘော်နပ် ရှေ့လိုဂိုနေရာတွေကိုပါ ခေတ်ဆန်မှု အနေနဲ့ တွေ့ရမှာပါ။
အင်ဂျင် နှစ်မျိုးနဲ့ လာပါတယ်။ ပထမ တစ်ခုကတော့ ၂၅၀၀ စီစီ ဗီ6အင်ဂျင်နဲ့ ဖြစ်ပြီး မြင်းကောင်ရေ ၂၀၀ ထုတ်ပါတယ်။ ၃၅၀၀ လီတာ ကတော့ ၃၁၄ မြင်းကောင်ရေ ထုတ်ပြီး သူလည်း ဗီ6အင်ဂျင် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ မတ် အိတ်ခ်ျ ကားတွေဟာ ဆီစား သက်သာတဲ့ကားတွေကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ဓာတ်ဆီကားတွေ ဖြစ်ပြီး ဆီစား သက်သာပါတယ်။ ဆီစား သက်သာအောင်လည်း လုပ်ထားပြီး ကာဗွန်ဒိုင် အောက်ဆိုဒ် ထုတ်လုပ်မှုကိုလည်း လျော့ချထားပါတယ်။ ၂၅၀၀ အင်ဂျင်ကတော့ တစ်လီတာကို ၁၃.၀ ကီလိုမီတာ ရောက်ပါတယ်။ ၃၅၀၀ စီစီ အင်ဂျင်ကတော့ တစ်လီတာကို ၁၀.၂ ကီလိုမီတာရောက်ပါတယ်။
ဆလွန်ကားလည်း ဖြစ်ပြီး ကားရှည်ပါတယ်။ ရှေ့မီးကို ထင်ထင်ရှားရှား နှစ်လုံးတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ဘောနပ်က မျက်နှာပြင် တစ်ပြေးတည်း မဟုတ်ပဲ မီးလုံးနေရာဖက်မှာ ဘောနပ်ကို အနည်းငယ် လိုင်းဖော်ထားတာကို တွေ့ရပါမယ်။ မီးလုံး နှစ်လုံးဖက်ကြားရှိ ကား ထိပ်မှာတော့ မတ် အိတ်ခ်ျဆိုတဲ့ တံဆိပ်ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး မီးလုံးတွေက စပေါ့စ် ဆန်ပါတယ်။ အနောက်မီးကလည်း ရှင်းရှင်း လင်းလင်း နှစ်လုံးတည်းပါပဲ။ အတွင်းခန်းအနေနဲ့ ၂၀၀၄ ကတည်းက စပြီး ဒီဇိုင်းက မိုက်ပါတယ်။ ကျွန်းတွေကို စီယာတိုင်နဲ့ ဂီယာဘောက်စ်၊ တံခါး ပါဝါ ၀င်းဒိုး ဘောင်တွေမှာလည်း တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂီယာတံတွေ ပုတိုတိုလေး ဖြစ်သွားပြီး ဂီယာ ဘောက်စ် က ထိုင်ခုံ နှစ်ဖက်ကြားမှာ တည်ရှိပြီး အလယ်ကို ခြားထားပါတယ်။ တီဗီပါရှိပြီး ဌင်းအတွက် နေရာကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ စီယာတိုင်မှာ ခလုတ်တွေပါရှိလာတာကိုလည်း တွေ့ရပါမယ်။ ၂၀၀၉ မှာ ထုတ်တဲ့ မတ် အိတ်ခ်ျ ဒုတိယမျိုးဆက်တွေဆို ပိုပြီး ဒီဇိုင်းပိုင်းကို တိုးမြင့်ထားတာ ကို တွေ့ရပါမယ်။ ပါဝင်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေ အနေနဲ့ ပါဝါ လောခ့်၊ ပါဝါ စတီယာရင်၊ တီဗီ၊ လေအိတ်၊ ပါဝါ ၀င်းဒိုးတွေကို ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်.
တိုယိုတာ မတ်ခ်ျ အိတ်တွေဟာ ၂၀၀၄ ကနေ စပြီး ထုတ်တဲ့ကားတွေ ဖြစ်တာနဲ့ အညီ ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာ ဆန်းသစ်ပြီး လှပပါတယ်။ ၂၀၁၁ မော်ဒယ်တွေဆို ပိုပြီး ဒီဇိုင်း ဆန်းသစ်လာပြီး အပြင်ဖက်နဲ့ အတွင်း ကားအစိတ်အပိုင်း အားလုံးနီးပါး ပြောင်းလဲသွားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင် အားမှာလည်း မြင်းကောင်ရေ ၂၀၀ အားကို ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ ၂၅၀၀ စီစီကို သုံးထားတဲ့ အတွက် ဇိမ်ခံ ဆီဒန်ကားတစ်မျိုး အနေနဲ့ အသုံးပြုနေကြတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းခန်းကလည်း ဒီဇိုင်းလှပပါတယ်။ တီဗီ၊ စီယာတိုင်၊ တံခါးပေါက်တွေကအစ လှပသေသပ်ပါတယ်။ အနောက်မှာ ပစ္စည်း တင်လို့ရတဲ့ အပြင် လူ(၅) ယောက် စီးလို့ရတဲ့ အတွက် အသုံးပြုကြပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာတော့ ၂၀၀၄ ကနေ ၂၀၀၉ အထိကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၄ ကနေ ၂၀၀၅ ကို ဈေးနှုန်းမှာ ကျပ်သိန်း ၁၈၀ ၊ ၂၀၀၊ ၂၅၀ ရှိနိုင်ပြီး ၂၀၀၇ ကနေ ၂၀၀၉ ကိုတော့ ကျပ်သိန်း ၃၀၀ နီးပါးကနေ ကျပ်သ်ိန်း ၅၀၀ နီးပါး ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်လေလံကနေ လည်းကောင်း၊ အရောင်း စင်တာကနေ လည်းကောင်း ရနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၇ နဲ့ ၂၀၀၈ အကျော်ကို စလစ်လွတ်သွင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဌင်းအောက်ဆိုလျှင်တော့ စလစ်နဲ့ ကပ်ရပါမယ်။
တိုယိုတာ မတ် အိတ်ခ်ျကားတွေဟာ အင်ဂျင် ဆီစားအားမှာ ဟတ်ဘတ်နဲ့ မီနီကားလေးတွေလောက်တော့ မသေးပေမဲ့ ဆလွန်ကား ကြိုက်သူတို့ အတွက် အင်ဂျင်အား ကောင်းကောင်းနဲ့ တစ်လီတာကို ၂၅၀၀ စီစီဆိုလျှင် ၁၃ ကီလိုမီတာ အထိကို ပြေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး အိမ်စီးကားတွေအတွက် အဆင်ပြေတဲ့ ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။